I-WordPress Mobile Theme
I-WordPress Mobile ene-WPtouch Pro
NgoMsombuluko, Julayi 4, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abantu abambalwa baphawule ngokuthi ibhulogi ibukeka kahle kangakanani kuselula. Njengamanje sithola izivakashi zethu ezibalelwa ku-5% ngeselula… 2% ku-iPhone kuphela.
Kubalulekile ukuhlinzeka ngomuzwa ohlukile womsebenzisi ngedivayisi… noma ngabe usebenzisa Sula ngomuzwa oyingqayizivele we-iPad - noma usebenzisa I-WPtouch Pro ngolwazi lwe-WordPress ephathekayo ku-iPhone, i-Droid noma amanye amadivayisi. Qaphela: I-WPtouch Pro futhi isekela i-iPad… ayifani neze ne-Onswipe.
Ibaluleke kangakanani i-interface yeselula ongayibuza? Ngokusho kwe- yethu Ama-Analytics, ukuvakashelwa kwamaselula namathebulethi kukhuphuke ngenyanga engu-22.1% ngaphezu kwenyanga! Ukuvakashelwa kwe-iPhone kukhuphuke ngenyanga engama-32.2% ngaphezulu kwenyanga.
Lokhu kuyahambisana nokwamukelwa kweselula nezibalo zokusetshenziswa kwe-inthanethi ephathekayo. Ukufundwa kwe-imeyili yeselula kuyanda… njengoba kuyathengwa… nge ngaphezu kuka-50% wabasebenzisi beselula abathenga inthanethi.
Izinkampani eziningi zingahle ziciphange izindleko zokusebenzisa okuqukethwe kwazo ukuze zisetshenziselwe iselula… kepha akufanele. Izinhlelo eziningi zesimanje zokuphathwa kokuqukethwe zinamandla okusebenzisa izingqikithi eziqondene neselula noma amashidi wesitayela. I-WPtouch Pro kubiza kuphela ama- $ 39 kusayithi ngalinye! Ungathanda ukukhuphula inani lakho lezivakashi ngama-22% ngama- $ 39? Angiqiniseki ngezinkampani eziningi kakhulu ezingeke.
Tags: i-wordpress yeselulai-wordpress mobilei-plugin yeselula ye-wordpresswptouchwptouch pro
I-Marketing Podcast yethu iyatholakala ku-Stitcher!